Mac အတွက် Paint အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာ ၈ ခု မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Mac အတွက် Paint အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာ ၈ ခု
Windows အတွက် Paint အပလီကေးရှင်းသည်သင်လုပ်နိုင်သောဂန္ထဝင် application တစ်ခုဖြစ်သည် အနုပညာအစစ်အမှန်များပြုလုပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံလောက်သောစိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့်ဗဟုသုတရှိသရွေ့၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကအသုံးမ ၀ င်ပါ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် Paint ကို Windows အတွက်သာရနိုင်သည်။
သင်ရှာနေတယ် Mac အတွက် Paint အတွက်အခြားနည်းလမ်းများ အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သင်သည်မှန်ကန်သောနေရာသို့ရောက်လာသည်။ macOS ဂေဟစနစ်တွင် Windows ကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းများစွာမရှိသော်လည်း၊ ဤစနစ်နှင့်သာတွဲဖက်နိုင်သောအပလီကေးရှင်းများကို Paint တွင်စိတ်ဝင်စားစရာအခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။
ဤတွင်ငါတို့သည် Mac အတွက် Paint အတွက်အကောင်းဆုံးအခြားနည်းလမ်းများကိုသင်ပြသည် သူတို့ကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်.
2 Tux သုတ်ဆေး
5 သုတ် S
6 ပိုင့် - ပန်းချီကားသည်ရိုးရှင်းသည်
7 Mac အတွက် Paint X
ကျွန်ုပ်တို့သည် Paintbrush ကိုရှေး ဦး စွာနာမည်ပေးထားသောကြောင့်၎င်းသည်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက application တစ်ခုဖြစ်သည် windows အတွက် version တစ်ခုရှိခဲ့တယ် ၎င်းသည် Paint ၏လက်တွေ့ခြေရာခံသော်လည်းအခြား user interface တစ်ခုနှင့်
ဤအပလီကေးရှင်းသည်လိုအပ်သော Mac အသုံးပြုသူများအတွက်စံပြဖြစ်သည် ရိုးရှင်းသောပုံများဆွဲပါ၊ စာသားထည့်ပါ၊ နေရာများကိုမီးမောင်းထိုးပြပါ လေးထောင့်များသို့မဟုတ်စက်ဝိုင်းများဖြင့်ပုံ၏ဆေးမှုတ်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းကို Windows အတွက် Paint တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးသောစာရွက်စာတမ်းများကိုသိမ်းဆည်းသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည် extension များကိုသုံးနိုင်သည် jpeg, bmp, png, tiff နှင့် gifမရ။ Painbrush ၏နောက်ဆုံးရရှိနိုင်သည့်ဗားရှင်းမှာနံပါတ် ၂.၆ ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် OS X 2.6 နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီးသင်လုပ်နိုင်သည် ဒီ link မှတဆင့် download လုပ်ပါ.
ဤသည်၌ အခြားလင့်ခ်, ဗားရှင်းများကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည် OS X 10.5 Leopard (သို့) ပိုမိုမြင့်မားပြီး OS X 10.4 Tiger (သို့) ပိုမိုမြင့်မားသော
Tux သုတ်ဆေး ပျော်စရာ၊ သုံးရလွယ်ကူသော၊ open source drawing program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံဆွဲကိရိယာများ၊ ရာဘာတံဆိပ်တုံးအထောက်အပံ့၊ Magic (အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများ) ကိရိယာများ၊ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ပြင် / ပြန်လုပ်ရန်၊ ကလစ်တစ်ချက် နှိပ်၍ သိမ်းဆည်းရန်ပုံငယ်ဘရောက်ဇာ၊ အသံအကျိုးသက်ရောက်မှုများပါ ၀ င်သည်။
ငါတို့လေ့လာကြည့်ရင် အင်္ဂါရပ်အားလုံး ဒီအပလီကေးရှင်းကငါတို့ကိုကမ်းလှမ်းတယ်၊ ငါတို့က Paint ထက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုပိုများတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုတယ် Photoshop Lite အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု
Tux Paint ကို၎င်း၏မှတဆင့်အခမဲ့ download လုပ်နိုင်သည် က်ဘ်ဆိုက် ဘာသာစကား ၁၅ မျိုးကျော်ဖြင့်ရနိုင်သည်။ ဤလျှောက်လွှာ OS X 10.10 မှစ၍ ထောက်ပံ့သည်OS X 11 Big Sur ပါဝင်သည်။
ဒီထူးဆန်းတဲ့နာမည်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ Mac အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အပြင် Windows အတွက်ဗားရှင်းတစ်ခုပါ ၀ င်တဲ့အခြားအပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုငါတို့တွေ့တယ်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောကိရိယာများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် ရှုပ်ထွေးသောသရုပ်ဖော်ပုံများမှ doodles သို့ဆွဲပါ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ Paint နှင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
FireAlpaca သည် Paint၊ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုထက်ပိုသည် GIMP သို့မဟုတ် Photoshop ကိုအခြားနည်းလမ်း ဒါပေမယ့်လုပ်ဆောင်ချက်နည်းပါတယ်။ အစပိုင်းမှာအဲဒါကိုကိုင်ဖို့နည်းနည်းခက်ပေမဲ့၊ ငါတို့ကအဲဒါကိုအချိန်ပေးပြီးလုပ်ရင် Windows မှာ Paint ကိုအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဆိုတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်။
FireAlpaca ကိုစာမျက်နှာ၏မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်နိုင်သည် တီထွင်သူမရ။ ဤအပလီကေးရှင်းကိုဘာသာစကား ၁၀ မျိုးဖြင့်ရနိုင်သည် ငါတို့ကစပိန်မှာတွေ့တဲ့အထဲမှာ
Mac အတွက် Paint အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုစဉ်းစားရန်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အပလီကေးရှင်းသည် Deskcribble ဖြစ်ပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုလက်ဖြင့်ဆွဲခွင့်ပြုရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့လည်းလုပ်နိုင်သည်။ blackboard တစ်ခုအတွက်သုံးပါကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများသည်ရေးခြစ်ခြင်း၊ တင်ပြခြင်း၊ မှတ်ချက်များပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်ဖျော်ဖြေသည်။
ဤလျှောက်လွှာကိုသင့်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါ Mac App Store မှတစ်ဆင့်၎င်းသည်အက်ပ်အတွင်း ၀ ယ်ယူမှုများမပါ ၀ င်ဘဲသင် Windows မှ Mac သို့ပြောင်းခဲ့လျှင် Paint အတွက်ကြီးကျယ်သောအစားထိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Paint S သည်aဖြစ်သည် ပုံဆွဲကိရိယာနှင့်ပုံအယ်ဒီတာ စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့ဘယ်အရာကိုမဆိုလွယ်လွယ်ကူကူဆွဲပါ၊ အရွယ်အစားကိုဖြတ်ပါ၊ ဖြတ်ပါ၊ လှည့်ပါ၊ ၎င်းတို့အားခြေရာခံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ပါ။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ် အလျားလိုက်နှင့်ကွေးထားသောစာသားများထည့်ပါ ပုံများနှင့်ပတ်သက်။ အက်ပလီကေးရှင်းသည်အလွှာများကိုလည်းထောက်ပံ့သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်လည်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ Pain X ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်။
ဖိုင်များကို tiff, jpeg, png, bmp ပုံစံများဖြင့်ဖွင့ ်၍ သိမ်းပါ။
ဖြည့်စွက်၊ မျက်စဉ်း၊ လိုင်း၊ ကွေး၊ ထောင့်မှန်စတုဂံ၊ ဘဲဥပုံ၊ စာတိုစသည့်ကိရိယာအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Paint S သည်သင့်အတွက်သေးငယ်လွန်းသည်။ full version ကိုစမ်းသုံးနိုင်ပါတယ် Paint Pro ပါ အရာ 14,99 ယူရိုမှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ: Yong chen
ပိုင့် - ပန်းချီကားသည်ရိုးရှင်းသည်
Paint နှင့်တူသောဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ပြသောအခြားရွေးချယ်စရာအားလုံးတို့တွင် Pinta သည်ကျွန်ုပ်တို့အခမဲ့ download ရယူနိုင်ပြီးအပလီကေးရှင်းအတွင်းမည်သည့် ၀ ယ်ယူမှုအမျိုးအစားနှင့်မဆိုမပါ ၀ င်ပါ။ ၎င်းကို Windows၊ Linux နှင့် BSD တို့တွင်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
Pinta သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွန့်ပစ်ခြင်းကိုအဓိကထားသည် Paint တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သောတူသောပုံဆွဲကိရိယာများ၎င်းသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက် ၃၅ ချက်အထိသက်ရောက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းကိုစပိန်ဘာသာစကားအပါအ ၀ င်ဘာသာစကားပေါင်း ၅၅ မျိုးကျော်တွင်ရနိုင်သည်၊ ၎င်းကိုအလွှာများပံ့ပိုးပေးသည် က်ဘ်ဆိုက်.
Mac အတွက် Paint X
Paint X သည် Windows အတွက် Paint တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သကဲ့သို့ပုံဆွဲရန်၊ အရောင်တင်ရန်နှင့်တည်းဖြတ်ရန်ပန်းချီ application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့သည် Paint X ကဲ့သို့၎င်းကိုလည်းသုံးနိုင်သည် digital sketch pad၊ အခြားဓာတ်ပုံများ၊ စာသားများနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုထည့်ရန်ဒီဇိုင်းပရောဂျက်များ
ရနိုင်သောဒစ်ဂျစ်တယ်စုတ်တံများစွာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် လေဖြတ်ခြင်းကိုပုံစံအမျိုးမျိုးလုပ်ပါ ငါတို့မှာလုံလောက်တဲ့သည်းခံမှုရှိရင်ငါတို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းနဲ့ဘာသာပြန်နိုင်မယ်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအခြေခံတည်းဖြတ်မှုလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်လည်းခွင့်ပြုသည် ပုံများကိုလှည့်ခြင်းနှင့်အရွယ်အစားပြောင်းခြင်း၊ ၎င်းတို့အားဖြတ်ခြင်း၊ ရောင်စုံအရာဝတ္ထုများဖြည့်ခြင်း၊ ဖိုင်များမှအကြောင်းအရာများကိုကူးခြင်းနှင့်ကူးထည့်ခြင်းကဲ့သို့သော။
၎င်းသည် click နှင့် drag လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထောက်ပံ့သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖိုင်များစွာကိုအတူတကွဖွင့်ရန်၊ ဖိုင်များကိုထောက်ပံ့သည် .png, .tiff, bmp, jpeg, gif..
Paint X ကိုသင့်အတွက်ရနိုင်သည် လုံးဝအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်နှင့်ကြော်ငြာများပါဝင်သည်၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပါ ၀ င်သော in-app ၀ ယ်ယူမှုကို သုံး၍ ဖယ်ရှားနိုင်သောကြော်ငြာများမှာ ၄.၉၉ ယူရိုရှိသည်။
Paint X - ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ဆွဲခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်း
Sheashore သည်တစ်ခုဖြစ်သည် open source app ၎င်းသည် Photoshop သို့မဟုတ် GIMP ကဲ့သို့အလွှာများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံများကိုလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်လျင်မြန်စွာတည်းဖြတ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အံ့သြဖွယ်ရလဒ်များကိုရယူနိုင်သောဤအပလီကေးရှင်းများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါ ၀ င်သည်။
ဤအပလီကေးရှင်းကို GitHub မှတဆင့်အမြဲရရှိသော်လည်းပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပရိသတ်သို့ရောက်ရန်အပလီကေးရှင်းဖန်တီးသူသည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည့်နေရာမှ Mac App Store ၌ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါ ၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်ရနိုင်သော macOS version အားလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
၎င်းတွင်အက်ပ်အတွင်း ၀ ယ်ယူမှုအမျိုးအစားများမပါ ၀ င်ပါ။ သင်အပလီကေးရှင်းကိုနှစ်သက်လျှင် developer ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဖိတ်သည် အတတ်နိုင်ဆုံးရိုးသားတဲ့ထင်မြင်ချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ပါ အပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » Mac အတွက် Paint အတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာ ၈ ခု
PowerPoint တမ်းပလိတ် ၁၀၀ ကျော်ကိုအခမဲ့ download လုပ်ရန်